Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Guinea » Guinea achụọla ndị otu Afrịka maka mwakpo ndị agha
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa na Guinea • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Guinea chụpụrụ na Afrịka
Otu mba Afrịka agbaala ndị isi ọchịchị aka ike ka ha mee ka nchekwa nke onye isi ala a chụrụ n'ọchịchị na ndị ọzọ ejidere.
Otu mba Afrịka kwụsịtụrụ isonye na Guinea.
Akwụsịla Republic of Guinea na ndị otu mkpebi AU niile.
AU kwụsịtụrụ ndị otu Guinea na -esochi ngagharị iwe ndị agha na Sọnde gara aga.
Ngalaba na -ahụ maka udo na nchekwa nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba Afrịka kwupụtara n'akara Twitter ya taa na nzukọ a kwụsịtụrụ isonye na Guinea rue Fraịde, maka ntuliaka ndị agha mere na mba ahụ n'oge na -adịbeghị anya.
"Kansụl <…> kpebiri ịkwụsịtụ Republic of Guinea na mmemme AU/otu na-eme mkpebi," African Union ozi na -agụ.
Otu mpaghara mba 15 kwụsịrị na Guinea ka Sọnde gachara ịgba ọchịchị mgba okpuru onye ndu ya bụ Col. Mamady Doumbouya. Na Septemba 5, Colonel Mamady Doumbouya, onye ọchịagha nke otu ndị ama ama nke ndị agha pụrụ iche nke Guinea, kwupụtara njide nke Onye isi ala Alpha Conde, onye nọ n'ọchịchị kemgbe 2010.
Ndị nnupụisi ahụ guzobere kọmitii mba maka njikọta na mmepe Guinea, kagburu iwu obodo, kwatuo gọọmentị na ụlọ omebe iwu nke mba ahụ, họpụta gọvanọ ndị agha, ma tinye iwu ịlọta.
Ndị ọchịchị ahụ enyela iwu ka ụlọ akụ etiti kwụsị ọrụ ndekọ ego gọọmentị niile na mbọ iji chekwaa akụ steeti ma “chekwaa mmasị mba.”
Otu mba Afrịka agbaala ndị isi ọchịchị aka ike ka ha mee ka nchekwa nke onye isi ala a chụrụ n'ọchịchị na ndị ọzọ ejidere. Conde ka nọ n'aka ndị ọchịagha, ndị kwuru na ọ nọ na ebe echekwara nke nwere ike nweta nlekọta ahụike.